QCS PCB - Shenzhen Wonderful Technology Co., Ltd
The Check Rules Design (DRC) waa talaabo muhim u ah in tayada PCB. Marka aynu ka macaamiisha ah helaan si cusub, waxaanu isticmaali doonaa qalab iswada si loo xaqiijiyo in qaabka uusan haysan wax meelaynta gaarka ah, wadada ama qalad kale khariidad addressable.?
jeeg DRC Tani waxay hubin doonaan ku netlist iyo khariidad ka dhanka ah caqabadaha iyo xeerarka design PCB. Waxa ay hubinaysaa meelaynta qayb guddiga iyo raad roonaadeen daacadnimada ah ee ka kooban isa, biinanka untraced, meelaynta lakabka aan sax ahayn iyo caqabadaha jira XAGGEE set for wadada width raad iyo clearances.?We sidoo kale samayn jeeg xukunka wax soo saarka si loo hubiyo in design PCB waa manufacturable. Haddii aan heli qalad kasta oo aan heli doono in xiriir la macaamiisha ah.
Amarada noocooda : Waxaan bixinaa Dayuurada-oo baaraya E-Test for amarada mugga iyo noocooda yar. Guddoonka circuit (PCB) loo hubiyo iyada oo qalab loo yaqaan Flying-oo baaraya E-Tester. The Dayuurada tijaabiyeyaal baaritaan aan u isticmaalno waxay leeyihiin xanibaadyo yar on helaan, waxay u baahan yihiin no kulan ee imtixaanka, iyo tijaabin kartaa loox tirada shiidaa aan xad lahayn lagu wadho. Tester wuxuu hubin doonaa wareeggeedii gaaban, wareeggeedii furan iyo in la hubiyo ku lahaayeen shabagyo PCB aan sameeyey waa isku mid sida shabagyadoodii ee design. Ka dib markii baaritaanka la dhameeyo, heerka waayin loox noqon doonaan in ka yar 1%.?
Amarada Production : Waxaan u isticmaali kulan Imtixaanka si ay u tijaabiso amar-soo-saarka. Sariirta A musmaarrada ahaatid waa kulanka imtixaanka dhaqameed elektaroonik ah taas oo uu leeyahay musmaarradii badan la geliyo godadka in phenolic Epoxy maro galaas sheet ah dahaaray (G-10) oo lagu toosiyaa la isticmaalayo musmaarradii tooling in ay xiriir la sameeyaan dhibcood imtixaanka on board a wareeg daabacan.
kulanka waxaa ku jira soo diyaariyeen ah ee biinanka pogo yar, guga-raran, pin pogo kasta ka dhigaysa xiriir la mid ah Guntin ah ee circuitry ee DUT ah (qalab hoos imtixaanka). By riixaya DUT hoos ka dhanka sariirta musmaarrada, la xiriir lagu kalsoonaan karo waxay noqon kartaa si deg deg ah oo isku mar la dhigtay boqolaal ama xataa kun oo dhibcood imtixaanka ee shaqsi gudahood circuitry ee DUT ah.
Tester wuxuu hubin doonaa wareeggeedii gaaban, wareeggeedii furan, iyo in la hubiyo ku lahaayeen shabagyo PCB aan sameeyey waa isku mid sida shabagyadoodii ee design. Ka dib markii baaritaanka la dhameeyo, heerka waayin loox noqon doonaan in ka yar 0.1%.
AOI (Automated kormeerka indhaha)
Waxaan u isticmaali AOI ah si loo hubiyo lakabyada hoose ee multi-layers PCB. AOI aragga uu baaritaanku dusha sare ee PCB ah. Guddiga ayaa waxaa shiday by dhowr ilo iftiin iyo arkay by scanner ah ama by tiro ka mid ah kamaradaha qeexitaanka sare. Tani waxay awood u socodka ah ee dhammaan meelaha guddiga.
AOI kormeerka ah guddiga PCB u dhashay ogaan doonaa sifooyinka soo socda:
* Khadka width xadgudubyada
* Xadgudubyada kala dheereynta
* La'yahay pads. ? Ie feature a in waa in guddiga uu maqan yahay
* Daba-gaabka wareeggeedii
* Raad gooyaa ama pads
* Hole dillaacin. (Hakadyada)? Ie god qoday (via) waa ka baxsan suufka soo degtey ay?
kormeerka Tani waa ka badan ayaa lagu kalsoonaan karo oo noqnoqonaysa badan kormeerka muuqaal ah buugan.
Waxaan nahay ISO 9001: 2008 certified. Oo waxaynu si kooban u qeexaan habka tayada our sida :?
* Siyaasadeena tayada waa war qoraal ah oo rasmi ah ka maamulka our, xidhiidh dhow in qorshaha ganacsiga iyo suuq-geynta iyo baahida macaamiisha. Siyaasadeena tayo leh la fahamsan yahay oo raacay dhammaan heerarka kala duwan iyo shaqaalaha oo dhan. shaqaalaha Our isticmaali doonaan ujeedooyinka la qiyaasi karo in ay ka shaqeeyaan dhinaca.
* Dhammaan xogta gacanta Tayada waxaa lagu diiwaangeliyaa. Records tusi doonaa sida iyo halka qalabka iyo alaabta ceeriin ayaa baaraandego, taas loo ogolaado alaabta iyo dhibaatooyinka ay suurtagal tahay in la ogan in isha. Nidaamka Our tayada waxaa si joogto ah u baadhaan iyo qiimeeyo waafaqsan iyo waxtarka.
* Nidaamka Our tayada diiwaan shuruudaha macaamiisha iyo abuuraa nidaam lagu la xidhiidhka macaamiisha ku saabsan macluumaadka sheyga, weydiimaha, qandaraasyada, amarada, warcelin iyo cabashooyinka.
* Waxaanu si joogto ah dib u eegaan qaab of our nidaamka tayada dhex dhawrka iyo kulamada gudaha. Waxaan ogaado in ama aan nidaamka tayada shaqaynaya iyo wixii horumar la samayn karaa. Waxaan dhibaatooyinka la soo dhaafay iyo dhibaatooyinka ka iman kara ka qaban doonaan. Our nidaamka hayaa diiwaanka ka mid ah hawlaha iyo go'aamada keentay, oo kormeera waxtarkooda.
* Waxaan diiwaan habraaca loo marayo wax ka qabashada dhabta ah iyo ka iman kara non-conformances (masalooyinka ku lugta leh qeybiyeyaasha ama macaamiisha, ama dhibaatooyin gudaha ah). Our nidaamka waa inuu xaqiijiyo in wax soo saarka (s) oo dhan loo arko "XUN" waxaa la karantiilay iyo in mid ka mid ma isticmaali kartaa alaabta xun ilaa aan go'aan ka gaari kara waxa la sameeyo oo la sheegay in wax soo saarka xun, waxaan u doondooni doonaa oo macaamiloon sababta asalka u ah dhibaatada ka ( s) iyo diiwaan geliyaan si ay u isticmaalaan sidii qalab loo hagaajin lahaa nidaamka.
waxyaabaha Our hoggaansamaan UL ammaanka shahaado 94V-0. All PCBs our kulmi rating olol 94V-0 iyo dhergin oo dhan looga baahan yahay UL. rating The olol per UL 94 qeexayaa iska caabin ah polymeric qayb 's dabka. ratings caadiga ah ee wax PCB waa 94V-1 ama ka fiican. The tirada hoose, sare u rating olol (tusaale ahaan, 94V-0 leeyahay rating ka sarreeya 94V-1).
Waxaan UL shahaado iyo la our logo shirkadda back to liiska saarayaasha PCB idman UL 's ogan karo. Si loo ogolaado in this category, soo saaraha PCB ah ku xiran yahay kormeer UL madax banaan habka ay wax soo saarka iyo qalabka.
Xakamaynta The Walxaha Halista ah Directive ama RoHS la ansixiyay bishii February 2003 by Midowga Yurub. dardaaran RoHS The qaatay saamayn on July 1, 2006, oo loo baahan yahay in la dhaqan iyo sharci u noqdaan in gobol kasta oo xubin. dardaaran Tani xadidaya isticmaalka lix maaddooyinka halista ah ee soo saaridda ee noocyada kala duwan ee qalabka elektarooniga ah iyo korontada.
Laga soo bilaabo 1-dii July 2006 qalabka korontada iyo elektarooniga ah soo bandhigay suuqa Europe waa in aan hogaanka, mercury, cadmium, chromium sun ku jira, mana retardants olol biphenyl ku polybromide, ama ether diphenyl polybromide.
All finishings hogaanka our free: Hal free Lead, Immersion lacag ah, ENIG iyo OSP oo dhan u hoggaansamaan shuruudaha RoHS.